Ọzụzụ nchekwa COVID-19 bidoro na Nevis
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » Ọzụzụ nchekwa COVID-19 bidoro na Nevis
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na Nevis Ministry of Health na Ministry of Tourism, na njikọ na Ndị njem nlegharị anya Nevis, amalitela iduzi usoro nke Covid-19 usoro ọzụzụ ọzụzụ nchekwa nchekwa maka ndị niile metụtara ya na agwaetiti ahụ. Nke a bụ ihe dị oke mkpa na nkwadebe zuru oke maka imeghe agwaetiti ahụ nye ndị njem mba ụwa. Mgbe emechara nzukọ ọmụmụ ihe nke ọma, a ga-enye ndị nwere oke “St. Kitt na Nevis Travel Akwadoro Akara ”, nkwenye na nguzobe a nwere nchebe ileta.
"Akwadoro Njem Njem Njem" bụ mmemme nke ndị ọchịchị St. Kitts Tourism Ndị ọchịchị ga-amata n'ụzọ doro anya ụlọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya bụ ndị megoro ọzụzụ achọrọ iji zute usoro nchekwa nchekwa na nchekwa kacha nta COVID-19.
A na-enye ndị niile so na Nevisian njem nleta ọzụzụ ọzụzụ seminarị "Akwadoro Njikọ Akwadoro Njem Ihe Nleba" maka izu abụọ bido na July 27th, 2020. Oge a na-agba ugboro abụọ, ewezuga Tọzdee, site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere 8:11 nke ụtụtụ na malite 30:3 pm ruo 30 : 6 elekere. Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-eduzi ha n'okpuru nduzi nke Ministry na Health, Ministry of Tourism and the Nevis Tourism Authority.
Ọzụzụ dị mkpa ma a ga-akpọtụrụ ndị niile metụtara ya na mpaghara ha. Nke a gụnyere ndị ọrụ tagzi, ebe nkiri, ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, ndị na-eme njem nlegharị (mmiri na ala dịka eg catamarans na ndị ọrụ ATV), ọdụ ụgbọ mmiri, ndị mgbere na ụlọ mmanya. Ozugbo emechara ọzụzụ achọrọ, nhazi ahụ ga-enweta asambodo anụ ahụ na dijitalụ dị ka ọrụ akwadoro njem. A gaghị ekwe ka ndị na-ahụ maka iwu na-erughị ụkpụrụ opekempe iji nweta 'Akwadoro Njem Njem' ka ha rụọ ọrụ ma jeere ọha mmadụ ozi, ndị Nevis Tourism Authority na ndị mmekọ ya agaghị akwalite ha n'ahịa ndị isi.
Dị ka onye isi oche nke Nevis Tourism Authority, Jadine Yarde si kwuo, "Ọzụzụ a dị mkpa maka ndị niile nwere oke aka na agwaetiti ahụ na usoro nlekọta ahụike na nchekwa maka Covid-19 bụ ihe dị oke mkpa na usoro mmeghe anyị. Ka anyị na-akwado imeghe, ọ na-ezipụ ozi doro anya na anyị na-echebara ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa anyị na ndị bi na anyị anya. Aswa dị ka anyị si mara na a kwadoro ya na onye ọ bụla nọ n'ógbè ahụ ga-arụkọ ọrụ ma nọgide na-amụ anya iji belata nsogbu ọ bụla na Covid-19 ozugbo anyị malitere ịnabata ndị ọbịa ụwa anyị ".
Ọrịa mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke COVID-19 emetụtala akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ndị njem n'ụzọ na-adịghị mma, wee gbochie mmepe akụ na ụba nke ukwuu. Usoro asambodo "Travel Approved Seal" bu otu ihe n'eme ka ndi nile nwere nketa rute nso na imeghari uzo. Mgbe agwaetiti ahụ dị njikere ịnakwere ndị njem, ha ga-emesi obi ike na agbaala mbọ niile iji chebe ahụike ha ma nwee ike ịnụ ụtọ ahụmịhe ha na Nevis.